Sean McColl နှင့်အတူမေးခွန်း & အ | ပြီးပြည့်စုံသောဆင်းသက်လာတောင်တက်စနစ်များ
ငါ 1997 နှင့်ငါ့မိသားစုနှင့်အတူတက်ပြီးစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တင်းနစ်ကလပ်သည်မိသားစုတစ်ခုအတွက်တစ်ခုခုလုပ်ချင်သည်ကိုပိတ်ထားလိုက်သည်။ ဒေသခံတောင်တက်အားကစားရုံအတွက်အသင်းဝင်တစ်နှစ် ၀ ယ်ခဲ့တယ်၊ ငါချက်ချင်းပဲချစ်ခဲ့တယ်။
ငါတောင်တက်၏ခံစားမှုအမြဲချစ်ကြတယ် ငါသည်လည်းယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့် command ကိုအပေါ်ဖျော်ဖြေဖို့ရှိခြင်းစင်ပေါ်မှာဖြစ်ခြင်း၏ခံစားမှုကိုချစ်။
အစဉ်မပြတ်ငါကွဲပြားခြားနားသောစည်းကမ်းသုံးခုအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြ: ခဲ, မြန်နှုန်း, ကျောက်သား။ ပေါင်းစပ်ထားသည့်စည်းကမ်းသည်အားလပ်ချိန်များနှင့်အတူသင်တစ်နေ့တာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်စည်းကမ်းသုံးခုလုံးကိုကျင့်သုံးသည့်အပြေးပြိုင်ပွဲနှင့်တူသည်။
ငါအမြဲယှဉ်ပြိုင်ဖို့ကိုချစ်ကြပြီးနေဆဲခိုင်မာတဲ့မယ့်။ ငါမကြာသေးမီကကမ္ဘာ့ဖလားအမှတ်အသား ၁၅၀ ကိုအောင်မြင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းမကြာသေးမီကအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုကျွန်ုပ်တိုက်ရိုက်မြင်ခဲ့သည်။
ငါနေ့တိုင်းလိုလိုလေ့ကျင့်တယ်၊ တစ်ခါတစ်လေမှာပြေးတာပဲ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ရာသီရောက်နေသည့်နေရာပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ လာမည့်ရာသီပုံပေါ် မူတည်၍ နိုဝင်ဘာလသို့မဟုတ်ဒီဇင်ဘာလတွင်တောင်တက်ခြင်းမှတစ်လအနားယူလေ့ရှိသည်။ ငါလေ့ကျင့်ပေးသောစည်းကမ်းသည်မည်သည့်လပေါ်မူတည်သည်။
ခဲလေ့ကျင့်ခန်းသည်နွေ ဦး ရာသီအထိမစတင်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ခံနိုင်ရည်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်းနှင့်အချိန်ကြာရှည်စွာတက်နိုင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ မြန်နှုန်းသည်အများအားဖြင့်မြန်နှုန်းလမ်းကြောင်းနှင့်ပြန်လည်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာပြီးကျွန်ုပ်၏ခြေထောက်များကိုအာရုံစိုက်သော Cross- လေ့ကျင့်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကိုပြုလုပ်နေသည်။ ကျောက်တုံးများသည်အရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံး၏ဂျက်ဖြစ်သည်။ သင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲတတ်ရန်၊ လမ်းကြောင်းဖတ်ရန်ကောင်းသော၊ သန်စွမ်းရန်၊
ကျွန်ုပ်၏အမြန်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုသည်အနားယူချိန်နှင့်အမြန်နံရံ ၈ ဆအထိပါ ၀ င်သည်။ ငါသည်ငါ့စိတ်နှင့်ကြွက်သားထဲမှာထွင်း "leadup" ရှိသည်။ အချိန်တန်ပြီဆိုရင်နည်းပြကပြောတယ်၊ ငါ PD ကိုသွားမယ်။ ငါမညှပ်မီငါငါ့ဖိနပ်ပေါ်တွင်တင်; ငါထမတ်တပ်ရပ်လျက်, lanyard ဖြောင့်သည်သေချာပါစေ။ ငါတက်, အနည်းငယ်နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူယူ, စတင်ရရှိထားသူဖမ်း။ ငါပထမ ဦး ဆုံးရွေ့လျားမှုအနည်းငယ်ကိုစဉ်းစားပြီးစတင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်၏မြန်နှုန်းမြင့်တက်မှုရစ်သမ်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။
ငါအစားအစာအုပ်စုအားလုံးစားရန်ကြိုးစားတစ်နေ့လျှင် 3-4 ကြိမ်စားရန်။ ည ၈ နာရီမှ ၈ နာရီအထိအစာရှောင်ခြင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်ကြိုးစားသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းကြီးတစ်ခုပြီးတဲ့နောက်ငါဟာပိုကြီးတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပြီးအရည်တွေများများစားစားသောက်ဖို့သေချာတယ်။ ငါကြိုက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၄-၅ မျိုး၊ အသားအနည်းငယ်နဲ့ငါလိုချင်တာကိုရွေးလို့ရလို့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးသွားစားရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါကထုပ်ပိုးပြီး voila ၌ထား!
ဒါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုသက်သက်မဟုတ်ဘဲ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဟာအခက်ခဲဆုံးပါ။ အသေးစားဒဏ်ရာများသည်အထက်တန်းလွှာအားကစားသမားများအတွက်သာမန်ဖြစ်သော်လည်းကြီးမားသောဒဏ်ရာများကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့၏အကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်လက်ခံသည်။ ငါတခါတရံပင်ပန်းပြီးစိတ်ဓာတ်ကျတတ်သည်။ အဲဒါဟာကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဆီကိုသူတို့ကိုဖြတ်သန်းသွားခြင်းပဲ။ ငါမှတ်မိဖို့အကောင်းဆုံးအရာကဒါဟာခရီးစဉ်, မတစ် ဦး ဦး တည်ရာမဟုတ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ငါဟာပုံမှန်တောင်တက်လေ့ကျင့်ရေးလေ့ကျင့်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်အိမ်နံရံကိုဖန်တီးကတည်းကအိမ်မှာအများအားဖြင့်တက်လေ့ရှိတယ်။ အများအားဖြင့်ခရီးသွားနေစဉ်ကျွန်ုပ်ဝင်နေသောတောင်တက်နေရာကြောင့်ခရီးသွားနေစဉ်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကျွန်ုပ်သွားရမည့်အားကစားရုံအသစ်များကြောင့်အမြင်အာရုံကိုမြင်နိုင်စွမ်းပိုရနိုင်သည်။
အကြီးမားဆုံးသောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်အားကစားရုံများတက်ခြင်းကိုပိတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်အရာအားလုံးကိုအိမ်သို့ယူဆောင်လာရသည်။ တံခါးပေါက်အထက်ခန်းမထဲမှာကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဘူတာတစ်ခုကိုထားခဲ့ပြီးနေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုရှိတဲ့ဗီဒီယိုများနှင့်သင်တန်းများပေးသည်။ ဒါကငါ့ရဲ့အိမ်ရိုးကိုတည်ဆောက်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။
ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေထဲကအမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ခုကတော့ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးကမ္ဘာ့ဖလားကိုအနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာထဲမှာဖြစ်ခဲ့သည် Kranj၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကိုတက်ပြီး ဦး ဆောင်ခဲ့သူပါ။ သြစတြီးယားနိုင်ငံမှ Jakob Schubert ကကျွန်တော့်ကိုအောက်မှာပြဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအနိုင်ရခဲ့တာကိုသိပေမယ့်အရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ ငါစင်မြင့်ပေါ်မှာရပ်နေတဲ့အထိပါပဲ။
နွေးထွေးသောနံရံများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်ပြီးယခုသင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးတောင်တက်သမားများနှင့်အတူနွေးထွေးနေပြီးအများစုမှာသင်ကြည့်ရှုလေ့ရှိသည်။ မည်သည့်ဖိစီးမှုမှထပ်မံမထည့်သွင်းရန်ထိုလှုပ်ရှားမှုများကိုဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးသောနည်းပြကောင်းတစ် ဦး ရှိရန်ကူညီသည်။ ငါ့အတွက်တော့ငါလွယ်လွယ်ကူကူပဲငါဒီနေရာမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုခဲ့ပြီးပြီ။ အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများအတွက်၎င်းသည်အတော်လေးလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်သင့်နာမည်ကိုခေါ်သည့်အခါသင်တက်နွေးရန်နှင့်တက်ဖို့လိုသည်။
တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားရင်မင်းရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုပြန်လုပ်မိအောင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုလုပ်ပါ။ အားကစားသမားအများစုစတင်သောအခါသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူတူပင်ကြောက်စိတ်များရှိသည်ကိုသတိရရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ ဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုလျင်မြန်စွာကျော်လွှားနိုင်တဲ့သူကတော့ရှေ့ဆက်ထွက်လာမှာပါ။
ငါ preference ကိုမရှိကြပါဘူး ငါတောင်တက်ခြင်း၏ခံစားချက်ကြိုက်တယ် ပြိုင်ဆိုင်မှုကောင်းရန်သင်ပလပ်စတစ်ကိုလေ့ကျင့်ရမည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အချိန်အများစုမှာပလပ်စတစ်ဖြစ်သည်။
ငါ Ceuse, Squamish, RRG, Hueco, ဆရာတော်, Cresciano, ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားသူများကိုချစ် ...
Kilian Fischhuber နှင့် ခရစ်ရှာမာ.
ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမနေ့ပြင်ပကိုတက်ပြီးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြုံခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မဘယ်လိုလမ်းလျှောက်ရမယ်ဆိုတာပြနေချိန်မှာလမ်းပြကပြုတ်ကျသွားပြီးဆေးရုံကိုလေကိုရောက်အောင်ပို့ပေးခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီညနေခင်းမှာပဲအသေးအဖွဲတွေ၊
အဲဒီမှာပြီးပြည့်စုံသောနေ့ရက်တစ်ခုသာရှိသည်သာမကလှုပ်ရှားမှုပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောနေ့ရက်များရှိသည်။ ငါနံနက် ၇ နာရီမှာစတာကိုကြိုက်တယ်၊ ငါနိုးလာရင်၊ ကော်ဖီတစ်ခွက်ယူပြီးအဲဒီညမှာအိပ်ပျော်နေသလိုခံစားရတယ်၊ ငါ့နေ့ကကောင်းလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်ဝယ်ခဲ့သော iPod ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ဝယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တင်ခဲ့သောနောက်ဆုံးသီချင်းများမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ဖြစ်သည်။
အထူးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ၃ ကား:
- ကောင်းသော Will Hunting
- Shawshank ရွေးနှုတ်ခြင်း
ငါ့အကြိုက်ဆုံးတောင်တက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် “ အရုဏ်နံရံ”